I-Crypto-Derivatives Volume ifikelela kwi-602 yeebhiliyoni zeMark ngo-Meyi, ingxelo ye-States
Ukuhlaziywa: 7 Juni 2020
Umsebenzi ophuma kwi-crypto unyuke ngoMeyi kwaye ubhalise ixesha elipheleleyo, ngokwengxelo ekhutshwe yinkampani yedatha ye-CryptoCompare.
I-CryptoCompare ithi kwisifundo esandula ukukhutshwa ngoMeyi 2020 ukuba ivolivative derivative sonyuke yaya kuthi ga kwi-602 yezigidigidi, i-32 yepesenti itsiba. Uphando lukwatsho neendlela eziphambili zophuhliso.
Ngokwengxelo, ngoMeyi, uHuobi, uBinance, kunye ne-OKEx bamele ubuncinci iipesenti ezingama-80 zayo yonke into evela kwicandelo. Kwezi zintathu, uHuobi weza phezulu ukufikelela kwi-176 yezigidigidi zeedola, etsiba iipesenti ezingama-29 ukusuka ngo-Epreli. I-OKEx ifikelele kwi-156 yezigidigidi zeedola kwaye i-Binance, nge-139 yezigidigidi zeedola, yeza kwindawo yesithathu.
I-CryptoCompare ikwanikezela ukuba isiqingatha seBitcoin sokugqibela sinokuba nento enkulu yokwenza noku. Abarhwebi abaninzi kunye nabatyali mali babenesixa esihle semisebenzi eyongezelelekileyo kulindelo lwehafu yeBitcoin. Umbutho uqhubeke wathi kukho ukwanda okukhulu kwinani leenketho ze-crypto ezithengiswayo kwisifundo.
I-Deribit, utshintshiselwano lwezinto onokukhetha kuzo zazinokhetho lokunyusa ivolumu ngaphezulu kweepesenti ezili-100 umva ngoMeyi ukuya kwi- $ 3.06 yezigidigidi. Kusuku olungaphambi kwesiqingatha seBitcoin, iDeribit ibambe i-196 yezigidi zeedola ngexabiso leeyure ezingama-24 zokurhweba ukusukela oko yaqalwa kwiminyaka emine eyadlulayo.
IDeribit ifikelele kwinqanaba eliphezulu le- $ 1bn yevolumu yokhetho lweBitcoin ngoMeyi 19.
Utshintsho lweChicago Mercantile (CME)
Iingxelo zeCryptocompare zokuba i-Bitcoin (BTC) yenyanga ephelileyo ibone ukonyuka okukhulu kwevolumu yokuthengisa kunye nomdlali weziko iChicago Mercantile Exchange (CME) inyuka ngokukhawuleza ukuya kwi-7.2 yezigidigidi zeedola kwiipesenti ezingama-59.
Amanani okhetho lweziko kwi-CME afumene amanqaku ngenyanga nge-5,996 yeekhontrakthi, zenyuka nge-16 ukusukela ngo-Epreli. Utshintshiselwano olulawulweyo lukwabekwa phezulu imihla ngemihla ngomhla we-28 kaMeyi, ngemisebenzi ye-1,418 XNUMX yeekhontrakthi zeBitcoin.
Umthamo wokhetho lweDerebit unyuke ngoMeyi ukuya kwi- $ 3.06 yezigidigidi ngeipesenti ze-109.
Ikhontrakthi yexesha elizayo ye-CME inyuke nge-36% ngoMeyi ukuya kwi-166,000 yevolumu.
tags Bitcoin (BTC), Utshintsho lweChicago Mercantile (CME), I-CryptoCompare, I-Deribit
I-Binance yazisa nge-Ethereum kunye ne-XRP yeKhontrakthi
Ukuhlaziywa: 26 May 2020
Utshintshiselwano olukhulu lwe-cryptocurrency Binance lubhengeze ukumiliselwa kweekhontrakthi zokhetho ze-Ethereum kunye ne-XRP. Ngokwesibhengezo, abasebenzisi beBinance baya kuba nakho ukufikelela kwimveliso ezintsha kuphela nge-app yeBinance yeselfowuni.
Kwinyanga ephelileyo, uBinance ubhengeze amathuba eBitcoin kubasebenzisi bayo. Ngomnikelo omtsha, iinketho ze-ETH kunye neXRP ziyafumaneka kumaxesha ahlukeneyo. Oku kubandakanya iiyure ezingama-24, iiyure ezisi-8, iyure e-1, imizuzu engama-30 kunye nemizuzu eli-10. Abasebenzisi banokufikelela kuphela kwizivumelwano ezinobungakanani obukhulu be-odolo ye-200,000 XRP kunye ne-200 ETH.
Ekuqaleni kwenyanga, umthamo weekhontrakthi ezivulekileyo kukhetho lwe-bitcoins lufikelele kwinqanaba elitsha. Ngomhla wesixhenxe ku-Matshi, ixabiso lilonke lokhetho lwe-bitcoin ligqithe kwi-7 yezigidigidi zeedola. Ngokweqonga lomhlalutyi we-Skew crypto, olona tshintsho luphambili luxanduva lwe-feat yi-Bakkt, i-OKEx, i-CME, iDeribit, kunye neLedgerX. Ngeli xesha, iDeribit yayilulwananiso kunye nelona nani likhulu lezikhundla ezivulekileyo zizonke ezingama- $ 1 yezigidi- phantse i-903%.
Kutshanje, iqonga lokuthengisa nge-Bybt crypto lilinganise iBitMEX njengeyona BTC inkulu kwintengiso yexesha elizayo, kunye neBinance njengeyesibini. Ngelo xesha, iBitMEX yayine-33.64% yazo zonke iikhontrakthi zemveliso yeoyile exabisa ngaphezulu kwe- $ 562 yezigidi. I-Binance i-19.1% yeekhontrakthi ze-OI ezixabisa ngaphezu kwe-319 yezigidi zeedola.
Okwangoku, ngokwe-Bybt, omabini amaqonga asekwizikhundla ze-1 kunye ne-2, nangona iBitMEX iwele kwi-33.13%, ngelixa iBinance ngoku ingu-17.84%.
Ethereum kunye nokukhethwa kweXRP
Izinketho zezivumelwano zotyalo-mali ezinika abathengisi ilungelo-kodwa hayi uxanduva-lokuthenga okanye ukuthengisa i-asethi ngaphezulu kwexesha elibekiweyo lexabiso elinikiweyo.
Izinketho ze-Ethereum kunye ne-XRP ziyafumaneka kwangoko kwi-Binance.com, abasebenzisi beselfowuni kufuneka bahlaziye iiapps zabo ukuze bakwazi ukufikelela kuzo.
"Ikontraki yokhetho yimveliso ekulindelwe kakhulu evumela abarhwebi kunye nabasebenzi mgodini ukuba bathenge i-inshurensi kwizikhundla zabo kwaye ivumela abacebisi ukuba basebenzise iintshukumo zorhwebo," utshilo u-Changpeng Zhao, u-CEO we-Binance, kwiposti yebhlog.
tags Binance, Iinketho ze-Ethereum, Izinketho zeXRP
I-Deribit Crosses $ 1 Billion kwi-Bitcoin Iinketho ezivulekileyo ezinomdla kwiMbali ePhakamileyo
Ukuhlaziywa: 21 May 2020
I-Crypto derivatives exchange Deribit, ibone i-spike ebalulekileyo kumthamo wezikhundla ezivulekileyo zeBitcoin kwiqonga layo. Olu tshintshiselwano lufikelele kwinqanaba eliphezulu elitsha le- $ 1 yezigidigidi nge-19 kaMeyi, ngokweedatha ezivela kwinkampani yophando kunye ne-analytics, Skew.
Uyilo lwamva nje lubangelwe kukudityaniswa kwezinto ezininzi, ezinje ngenani elikhulu labachaphazelekayo, ngokwegosa eliyintloko lokunyanzeliswa kweDeribit uLuuk Strijiers:
"Ingoma yangoku ichaphazeleka kwintembeko yentengiso, inani elandayo labadlali bamanye amazwe abanzi kunye nezahlukeneyo eDeribit kunye neenzame ezenziwe ngabachaphazelekayo abaninzi kunye nathi ukubonelela ngokusebenza okuphezulu kwezezimali, ukuthembeka kunye nokunxibelelana kunye nezinye iindlela zorhwebo ngawo onke amaxesha ukuya phezulu. -imakethi esemgangathweni. ”
IDeribit ibone ukukhula kunyaka-nangaphezulu kokukhula kokukhetha kweepesenti ezingama-270 kwi-2020 kuphela. Kwiveki ephelileyo umndilili wokuthengisa ubuye wasondela kwi-100 yezigidi zeedola, useta phezulu phezulu kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Umthamo wentengiso yemihla ngemihla inyuke ngepesenti ye-170 kwi-2020.
I-Deribit okwangoku ine-Bitcoin kunye ne-Ether yexesha elizayo, exabisa ngaphezulu kwe- $ 1.3 yezigidigidi. Izinketho zeBitcoin zibonisa iipesenti ezingama-74 zizonke.
IDeribit ibhengeze injongo yayo, kamva ngoJanuwari, ukuhambisa isiseko sayo ukusuka eAmsterdam. Ifemu ithe inyanzelekile ukuba yenze njalo kuba iNetherlands bezimisele ukwazisa ngemithetho emitsha ye-EU eza kuba nefuthe kwishishini.
Ukukhula kunye neThagethi yoRhwebo
Ukukhula komdla ovulekileyo kuqhutywa ikakhulu kukhetho oluphela kwinyanga ezayo. Ngaphezulu kweekhontrakthi ezingama-40,000 eziphelelwa ngoJuni 26, 2020, zivulekile ngoLwesithathu.
Izinketho zihlala zintsonkothe ​​ngakumbi kunesivumelwano sexesha elizayo kuba ixabiso lazo lixhomekeke kwizinto ezithile ezinje ngokuguquguquka, ixesha lokuphelelwa lixesha, inzala engenabungozi, njl njl.
Amaxabiso ekhontrakthi yexesha elizayo kulula kakhulu ukuyiqonda. Ngenxa yoko, ikamva laziwa kakhulu ngokungafaniyo nokukhetha, kwaye ngokubanzi babona inzala evulekileyo ephezulu. Kwimeko yeDeribit nangona kunjalo, imisebenzi yokhetho iphezulu kakhulu.
tags Iinketho zeBitcoin, Utshintshiselwano nge-Crypto Derivative, I-Deribit
IBitMEX ityhila iinkcukacha ngaphezulu kwecrypto yayo ye-inshurensi ye-Crypto
Ukuhlaziywa: 23 Matshi 2020
I-BitMEX ithi kwi-blog yayo esemthethweni ukuba ngo-Matshi 12 no-13 utshintshiselwano lufumene imibuzo emininzi malunga neziphumo ze-inshurensi yayo. Ikwachaza ukuba yintoni i-inshurensi yetrasti, kwaye kutheni ibalulekile.
IBitMEX ibhengeziwe, ngokuchasene noluvo loluntu:
Oku akunciphisi iindleko zokusebenza zeBitMEX okanye ukongeza kwimivuzo yeBitMEX, nangona kunjalo, ayisetyenziselwa ukwenza ngabom okanye kungenjalo ukwenza iimarike.
I-inshurensi ye-inshurensi ikho ukuzama ukuphepha i-Auto Deleveraging (ADL), ibango eliqinileyo. Kulapho ii-asethi zabathengisi abakhuphisanayo ziye zacocwa zaza zarhafiswa ukuze zibaleke ukungabinamali. Kuwo wonke umhla we-12 nowe-13 kweyoKwindla “ukungaqiniseki okungathethekiyo,” ngokuzama ukuphepha i-ADL, le ngxowa-mali yasebenza “njengendawo yokugqibela yokufowuna.”
I-Inshurensi ye-Inshurensi ikhona ukuze isebenze njengendawo yokugqibela yokuthintela i-ADL, nangona inyathelo elibi kakhulu, i-ADL yathintelwa ngokufanelekileyo ngomhla we-12 nowe-13 kuMatshi.
IBitMEX ikwatsho ukuba, njengokutshintshiselana okuqhelekileyo, abathengisi bayo abaze baphele benetyala ngaphezulu komda othunyelwe kudos kubungakanani bengxowa-mali kunye nemizamo.
Isiteyitimenti siqhubeka sichaza iimeko abarhwebi ekufuneka bazithathele ingqalelo ngelixa besebenzisa utshintshiselwano, njengexabiso lokutsalwa kunye nexabiso lokucinywa, kwaye xa injini yokuphelisa ithatha indawo. Iipesenti ezingama-XNUMX zezimvo ezichaphazelekayo ngenkqubo yokuphelisa. Kuya kufuneka uqhubeke kuphela kwicandelo abantu abaninzi abanomdla wokufunda:
Yeyiphi intsebenzo yokuTshitshiswa kweeNjini kunye neTrasti ye-Inshurensi ukusukela nge-12 ne-13 ka-Matshi?
Imvumelwano kukuba iBitMEX yafumana umnxeba oshukumayo owawunyanzela abathengisi ngaphandle kwesigaba kwaye bathumela i-BTC nosediving.
IBitMEX emva kokuyeka ukusebenza ngenxa yeengxaki zehardware kunye nemizuzu engama-30 kamva ixabiso njengelokuzama ukubuyela kwakhona.
Kwakuyaziwa kakuhle ngokutshintshiselana kuchaza ukuba ngeli xesha:
Ialgorithm yokurhweba ayifumanisanga esi sikhundla kwintengiso ngamaxabiso athi ngokuthe ngcembe aba bhetyebhetye (asezantsi) njengoko isikhundla esandisiweyo sandisiwe kwaye ixesha lokubamba liqhubekile.
Ngeli xesha, ukurhweba kwe-Injini yokuTyiwa kwaqwalaselwa ilahleko enkulu, eyenziwe yaza yakhutshwa njengengxowa mali yeinshurensi.
Utshintshiselwano, nangona kunjalo, alunakuthethelela ukuba oku kukhokelele njani kwiingxaki zehardware. Ngapha koko, enye inkalo yeBitMEX ayikhange ibonakale ngathi iphendule kakuhle yindlela imali yeinshurensi egcine ngayo ilahleko encinci, njengoko isenza imali.
Iposti entsha ifundeka ngolu hlobo:
Ukuhla kwezinga eliphezulu ngoMatshi 13 kwakungu-2,606 XBT.
Itrust yanamhlanje ye-Inshurensi ye-BitMEX ihleli kwi-35,028.2986 XBT. Ukusukela, ngelixa inkampani inyanzelisa, iTrust ayisebenzi njengomthombo weenzuzo kwinkampani okanye inefuthe kwimarike, kwenzeka njani ukuba iimali ezinje ngeDeribit zithathe olo tyando ngelixa iBitMEX ibonakala ingakhange ichukunyiswe?
tags BitMEX, Ingxowa-mali ye-Inshurensi yeBitMEX, Utshintshiselwano ngexabiso lemali
Iinketho zeBitcoin zeVolume zokuRekhoda iRandi yezigidi ezingama-60 kwiDeribit
Ukuhlaziywa: 15 Novemba 2019
Ukurhabaxa kokurhweba kuye kwancipha okwethutyana ngenxa yokuthotywa kwemarike ye-crypto, ebonakala ngathi yenza ukuba ixabiso leBitcoin lehle ngomhla. Ukurekhoda ixabiso eliphantsi le-8400 leedola mihla le, i-Bitcoin iyasokola malunga ne-8500 yeedola okwangoku. Okwangoku, imeko yentengiso ibangela i-FUD-Ukoyika ukungaqiniseki kunye nokuthandabuza phakathi kwabanini. Ngapha koko, ukwehla kwexabiso leBitcoin kwakukhokelwa kukuthengisa ngokuthengisa kwimarike enokuthi iqhubeke ukuba iBitcoin iyaqhubeka nokuhla.
Xa kuthelekiswa neentsuku zangaphambili zokurhweba, ivolumu yeBitcoin yoyise ngokungaphaya kwi-21.5 yezigidigidi zeedola ngalo mzuzu. Ngaphezu koko, yonke intengiso yentengiso ye crypto ngoku ithengisa phantsi kwe- $ 153.2 yezigidigidi. Ngaphandle kwanamhlanje, ivolumu yokuthengisa yeBitcoin ibincinci kwipesenti.
Ngokokuhlalutya kweemarike ezivela kwimveliso ye-crypto, i-SKEW, ivolumu yokukhetha iBitcoin ifikelele kwi-60.1 yezigidi zeedola kwiDeribit Exchange kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ngomthamo omncinci we- $ 2.0 yezigidi, ubuninzi be- $ 69.3 kunye ne-avareji ye- $ 28.6.
Ngaba oku kunokuba luphawu lwerali engenayo ye-Bitcoin?
Ewe, siya kuyazi ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Nangona kunjalo, uxinzelelo lwangoku lokuthengisa lusabeka uloyiko olukhulu kwindawo yonke ye-crypto, nangona iBitcoin inokunika ukukhanya ukuba siqala ukubona ukonyuka okukhulu kwevolumu yorhwebo
Ukuba sijonga ubungakanani bezorhwebo zeBitcoin kuzo zonke iindlela zotshintshiselwano lweBitcoin ezinje ngeBinance, iBitmex, i-Kucoin, iCex.io, phakathi kwezinye izinto, siya kuqaphela ukuba ivolumu iphantsi kakhulu njengoko abarhwebi kunye nabatyali zimali behleli bebambekile njengoko inyathelo elilandelayo leBitcoin lingaqinisekanga.
Ngokoluvo lwam, ukuthengisa i-BTC ngalo mzuzu kunokuba yindawo entle kubarhwebi abafutshane njengoko amaxabiso akhoyo ngoku esenokuba nzima kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Kwangelo xesha, abarhwebi banokufuna ukugcina ukungathathi cala okwangoku ukuze balinde ukungena okuhle nokugqibeleleyo.